Archive du 20180716
Marc Ravalomanana « Efa vonona izahay »
Anisan`ireo nahazo fanasana tamin`ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana.
Printsy Elakovelo, FHI AREMA Tsy hisy fifidianana ho vanona eto
Nivoaka tamin’ny fahanginany tamin’ny faran’ny herinandro teo ny Printsy Elakovelo, HFI eo anivon’ny antoko AREMA.
Maka Alphonse “Tsy fotoana iadin-kevitra intsony izao…”
“Dimy taona no efa nomena an`ireo mpisehatra politika hanomanana ny fifidianana ka tsy maintsy hampiharina ny lalàmpanorenana”, hoy i Maka Alphonse, filohan`ny komitin`ny fampihavanana Malagasy (CFM).
Ha ha ha ! Izao rangahy maka anao ry Jean a ! Tena mahatsikaiky ahy ianao e ! Mody asianao an’ity rey olona isaky ny mihetsika rehefa miteny ity. Reveko iny an !
Tetibolan’ny fiadidian’ny Repoblika Tokony hahena mba hamatsiana ny fokontany
Ny fametrahana ny rafitra fokonolona ihany ho an’ny antoko Madagasikara Sahy sy Vonona no tena vahaolana eto amin’ny firenena.
Fivarotantenan’ny ankizivavy ao Sainte Marie Any anaty lanonana no mifampaka ny lahy sy ny vavy
Hafakely ny fomba fivarotantenan’ireo tovovavy ao amin’ny nosy Sainte Marie amin’izao.
Zon`ny ankizy Misy fepetra tsy voahajan`i Madagasikara
Betsaka ny fanararaotana mianjady amin`ny ankizy eny anivon`ny fiarahamonina.
Mondial Russie 2018 Tompondaka eran-tany fanindroany ny Frantsay
Nifarana omaly alahady 15 jolay 2018 tao amin’ny kianja Loujniki any Moscou ny andiany faha-21 amin’ny fiadiana ny amboara eran-tany eo amin’ny taranja baolina kitra.
Thb Champions League Malagasy 2018 Lavon’ny Tam Port Berger 2-1 ny Elgeco Plus
Nisongadina indrindra teo amin’ireo vokatry ny lalao andro faha-2 ny “Thb Champions League Malagasy” notontosaina tany Fianarantsoa sy tetsy Vontovorona ny faharesen’ny Elgeco Plus nanoloana ny Tam Port Berger Sofia ary koa ny fahalavoan’ny Jet Mada Itasy nanoloana ny Fosa Juniors Boeny.
Rugby Silver Cup 2018 Lavon’i Zambie 31-29 ny Makis Malagasy
Mijanona eo amin’ny Vondrona B misy azy i Madagasikara fa lavon’i Zambie 31-29 teo amin’ny famaranana “Zone sud” tamin’ny sabotsy teo tany Lusaka Zambie.
Ady amin’ny Kidnapping Vonona hanampy ny Frantsay
Hiatrika fe-potoana tena manan-danja ho azy i Madagasikara afaka fotoana vitsy ka tokony hohamafisiny ny fisian`ny mangarahara amin`ny fifidianana ho filoham-pirenena sy solombavambahoaka manaraka, hoy ny masoivoho Frantsay, Veronique Vouland-Anéini.
Asan-dahalo sy fakana an-keriny Kivy amin’ny mpitandro ny filaminana ny olona
Mahonena ny mandre ny fitarainan’ny vahoaka any ambanivohitra any amin’ny afitsoky ny jiolahy sy ny dahalo.
Dahalo Efa nivoatra sy nanova paikady
Efa nivoatra be ny kolontsaina sy ny asan-dahalo eto Madagasikara ankehitriny. Raha entina hangataham-bady sy fanehoana fa lehilahy mahavita azy tany am-piandohana no antony hangalarana omby 1 dia niitatra tsikelikely taty aoriana. Ny omby 1 lasa 10 avy eo 30 ary niitatra an-jatony maro mihitsy taty aoriana.
Nodimandry tao Farafangana omaly alahady 15 jolay ny Solombavambahoaka voafidy tao Vangaindrano, Razafimily Constance izay mpikambana ao amin’ ny antoko Leader Fanilo.
Famaliana ny fitakian’ny mpampianatra Misy lafiny ara-toekarena tsy maintsy dinihana
Mbola mafana hatrany ny resaka fitakiana ataon’ny mpampianatra amin’izao. Tsiahivina fa 100 000 Ariary ampitomboana efatra no takian’izy ireo amin’ny fanjakana.
Tetikasa Ambatovy Nandrotsaka 48,8 miliara ariary ho an’ny kaominina sy ny faritra
Efa tamin’ny 14 aprily 2018 no vita sonia ny didim-pitondrana laharana 8902/2018, milaza ny fifampizaran’ireo vola azo avy amin’ny tamberim-bidin’ny fitrandrahana ataon’Ambatovy ny Nikela sy ny Kobalta ny taona 2012 hatramin’ny 2017,